२५ चैतबाट लगाइने भयो चिनियाँ खोप, को छन् प्राथमिकतामा ? - Vishwanews.com
२५ चैतबाट लगाइने भयो चिनियाँ खोप, को छन् प्राथमिकतामा ?
काठमाडौं । नेपालमा अहिलेसम्म भारतमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोपको प्रयोग भइरहेकोमा २५ चैतबाट भने चिनियाँ खोप लगाउन शुरु हुने भएको छ । चीन सरकारले अनुदानमा दिएका ८ लाख डोज खोप लगाउने अभियान उक्त मितिबाट शुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
चीनले ‘भेरोसेल’ नामक खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको छ । यो दुई साता अगाडी नै नेपाल आएको हो । यो खोप अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्ति, हिमालय सीमापार व्यापार गर्ने र चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा अध्ययन गर्ने वा अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीले पहिलो प्राथमिकतामा पाउने भएका छन् ।
चीन सरकारले चिनियाँ खोप लगाएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेशमा प्राथमिकता दिने निर्णय यसअघि नै गरेको छ । नेपाल भित्र अत्यावश्यक सेवामा अन्तर्गत स्वास्थ्य, खानेपानी, दुग्ध पदार्थ वितरणलाई राखिएको छ ।